Izindaba - I-Fashion for Good inikeza ukubuka konke kokupakisha okusebenzisekayo emfashinini
IFashion for Good yethula ukubuka konke kokuphakelwa okusebenzisekayo emfashinini
IFashion for Good, ipulatifomu yemfashini esimeme, iUtrecht University kanye neSustainable Packaging Coalition, babhale ngokubambisana iphepha elimhlophe eliveza ukubuka konke kokuphinda kusetshenziswe embonini yezemfashini. Inikeza ukucatshangelwa okubalulekile kokwamukelwa okuningana kwephakeji evuselelekayo futhi iveze umthelela wayo omuhle.
Okutholakele okushicilelwe ephepheni elinesihloko esithi 'The Rise of Reusable Packaging: Understanding the Impact and Mapping a Path to Scale' kukhombisa icala elicacile lomthelela wokupakisha okuvuselelekayo, okwethulwa kwezinye izimo, ukwehliswa okungaphezulu kwamaphesenti angama-80 ekukhishweni kwe-CO2, kanye namaphesenti ayi-87 kadoti omncane wepulasitiki, ngesisindo, uma kuqhathaniswa nenye indlela yokusebenzisa eyodwa. Leli phepha liphinde likhanyise ngenani lezinto eziguquguqukayo ezingaba nomthelela omkhulu kumthelela kubandakanya amabanga ezokuthutha, amanani okubuyisa nezinhlobo zokupakisha ezisetshenzisiwe.
Ukukhula kwe-e-commerce embonini yezemfashini, esevele iyingxenye enkulu yezimakethe ze-e-commerce, kuyashesha, kukhuthazwa ukuvalwa kwezitolo zezitini nodaka ngenxa yalolu bhubhane. Kanjalo, isidingo sokufakwa okukodwa, kanye nokwenziwa kwemfucuza, kuyanda. Kodwa-ke, izinketho ezingasetshenziswa kabusha, ezihlose ukuguqula ukupakisha kusuka ekusetshenzisweni okukodwa ziye kwimpahla esetshenziswa kakhulu, ziyenziwa njengenye indlela esimeme, kusho iFashion for Good ekukhulumeni nabezindaba.
“Ukupakisha okusebenzisekayo kuyisisekelo esikhulu sokuvala iluphu kupulasitiki embonini yezemfashini. Siyethemba ukuthi okutholwe kuleli phepha kuzosebenza ukuqinisekisa imboni ukuthi ukujikeleza kuyenzeka namuhla futhi kusetshenziswe lokhu njengethuluzi lamathuluzi ukubala indlela yabo yokuthola izixazululo ezizinzile, ”kusho uKatrin Ley, iFashion for Good.
Ukupakisha okusetshenziswa kanye kudinga ukukhishwa kwezinto ezingasetshenziswanga eziyintombi ekwakhiweni kwazo futhi kukhiqize inqwaba yemfucuza; amathani alinganiselwa ezigidini eziyi-15 eYurophu ngonyaka ka-2018. Esikhundleni sokulahlwa ngemuva kokufinyelela kumthengi, ukupakishwa okuvuselelekayo kuyabuyiselwa futhi kubuye kwenziwe kabusha ohambweni oluningi. Ngokwenza njalo, banqoba ezinye zezinkinga zokupakisha ezisebenzisa kanye futhi banamandla okunciphisa imithelela yemvelo yokupakisha ku-e-commerce.
Ngeminikelo evela kuFashion for Good Brand Partners u-Otto noZalando, kanye nabasunguli bokuphinda basebenze abasebenza kabusha i-Limeloop, i-RePack ne-Returnity, leli phephandaba liphinde liqhakambise izifundo zamacala kanye nokucatshangelwa okubalulekile ekukhuliseni ukupakisha okungaphinde kusetshenziswe.
Leli phepha laqalwa yiFashion for Good njengengxenye yomkhankaso walo obanzi wokubhekana nezinselelo zokupakishwa kwepulasitiki embonini yezemfashini.